Kedu. edu backlinks nwere ike imetụta gị na saịtị SEO?
A na-ewere ndekọ aha azụ Edu dị ka ihe kachasị ọnụ ahịa dịka ha sitere na ngalaba a pụrụ ịtụkwasị obi na ndị a ma ama. Ha na-ejikarị kọleji, mahadum, ụlọ akwụkwọ dị elu, na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ. Ka ha na-ewetara ndị ọrụ uru, Google na-eji ha kpọrọ ihe ma na-ebuli elu na SERP - hankook optimo 195/55 r16.
Ọ na-ewe oge na mgbalị iji nweta njikọ sitere na weebụsaịtị ndị dị otú ahụ. Otú ọ dị, uru bụ na ị ga-abụrịrị na ị bụ onye ọkachamara n'otu ebe mmụta ka ị nweta backlink site na ya na saịtị gị.
Ọ bụrụ na ị na-agba mbọ inweta àgwà. edu backlinks gị na saịtị ahụ, a post ga-bara uru maka gị ka m na-ezukọ ebe a niile usoro ahia njikọ usoro.
Uru nke. (back)
Google na-enwe ekele maka ihe niile eduzi. ngalaba na emeziri ga-adọta saịtị gị dị ka onye nwere nnukwu ego ma ọ bụrụ na ịnweta njikọ sitere na mpaghara ndị a;
Ebe nrụọrụ weebụ mmụta niile dị elu ma nwee uru nye ndị ọrụ;
Ịnye njikọ gị na. edu ngalaba, ị ga-enweta otutu nke ezubere iche okporo ụzọ nke ga-adị mfe iji tọghata;
Nweta uru na eziokwu nke weebụsaịtị.
Otu esi arụ ụlọ mma. edu backlinks?
Nye mpempe akwụkwọ
Iji mee ka mmekọrịta dị mma na mahadum na ụlọ akwụkwọ dị elu, ị nwere ike inye ụmụ akwụkwọ ha onyinye na scholarships.
Ị nwere ike ịmalite na-eduzi nyocha weebụ nke ụlọ akwụkwọ mmuta site na Google ma ọ bụ ọwa mpaghara ndị ọzọ nwere ike ịnye gị ozi dị mkpa na njirịrị gị. Jide n'aka, ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ ị họpụtara nwere ọtụtụ ndị ọbịa maọbụ jụọ ma mahadum ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ nwere obodo. Gakwuru ndị na-elekọta obodo a. Dabere na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa ị na-ere ahịa, ị nwere ike inye. akụrụngwa ihe nwere uru dị iche iche maka nkwụghachi maka backlinks. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ere ngwá egwuregwu, i nwere ike inye ndị nkuzi kacha mma egwuregwu. Ọ bụrụ na ị nwere ike nweta akara azụ azụ n'aka. edu weebụ nke bụ na ọ dịkarịa ala dị mkpa maka niche ahịa gị, mgbe ahụ i tinyekwuo uru na profaịlụ backlink gị.
Nye ego maka ụmụ akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị na-ere ngwaahịa ụfọdụ nke nwere ike ịba uru maka ụmụ akwụkwọ na mkpa ha kwa ụbọchị, ị nwere ike ịnwa ịnweta backlinks na nkwụghachi maka ego. Nye ụmụ akwụkwọ nwere nkọwa na onyinye dị icheiche. Ngwaahịa gị nwere ike ịmepụta ma ọ bụ ngwanrọ ndị nwere ike inyere ụmụ akwụkwọ aka ịchụso ụzọ ha. Ikwesiri ịjụ nwa akwukwo mahadum ka o biputa akwukwo gi na ulo oru weebụ.
Mepụta ọdịnaya ga-enwe mmasị na ụmụ akwụkwọ
Ị gaghị enweta backlinks dị mma, karịsịa site n'aka. ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụrụ na ọdịnaya weebụ gị nwere uru ọ bụla maka ndị na-agụ ya. Ọ dịghị onye na-achọ ịgụ ihe na-adịghị mma.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ụlọ akwụkwọ mmụta na-enwe blọọgụ maka ụmụ akwụkwọ. Ị nwere ike ịrịọ ka ebipụta isiokwu ndị dị mkpa ma na-eme nnyocha na ibe a ma ọ bụ ịnye azịza nwere ọgụgụ isi azịza nke ụmụ akwụkwọ.